GoSite: Nzuzo Niile-In-One maka Obere Ahia Iji Gaa Digital | Martech Zone
Mmekọrịta adịghị mfe n ’etiti ọrụ ndị obere azụmaahịa gị chọrọ na nyiwe ndị dịnụ. Maka akụrụngwa dị n'ime na ahụmịhe nke ndị ahịa na-enweghị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma nwere ike ịbụ mmefu ego maka ọtụtụ obere azụmaahịa.
Obere azụmaahịa chọrọ ọrụ gafere ọtụtụ nyiwe:
Weebụsaịtị - mkpokọta dị ọcha nke kachasị maka nchọta mpaghara.
ozi - ikike iji nwayọọ na-ekwurịta okwu na ezigbo oge na atụmanya.
ntinye akwụkwọ - usoro nhazi nke onwe gị na ọrịa kansa, ncheta, na ikike ịhazi oge.
ịkwụ ụgwọ - ikike ịgba ụgwọ ndị ahịa ma kwụọ ụgwọ.
Nyocha - ikike ịnakọta, nyochaa, na ịzaghachi nyocha ndị ahịa.
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa - nchekwa data ndị ahịa nwere ike iji ọrụ mee ihe iji jikọta ndị ahịa.
GoSite bụ usoro ikpo okwu niile na - eme ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịchọta, akwụkwọ, na ịkwụ ụgwọ maka ọrụ gị n'ịntanetị. Ihe ikpo okwu a choghi oru oru aka na obia na ngwa na ugwo. Ihe ikpo okwu gunyere:
Weebụsaịtị - weebụsaịtị zuru oke nke di mfe iji hazie ma hazie.
ịkwụ ụgwọ - Nabata ịkwụ ụgwọ site na Apple Pay, American Express, Visa, Google Pay, MasterCard, Discover… site na ekwentị ha, ozi ederede, ma ọ bụ ihu na ihu.
ozi - otu ikpo okwu iji weghachite oge gi ma mee ka ndi mmadu nwekwuo obi uto. Gụnyere ozi ngwa ngwa, ozi ederede, ozi Google My Business na ndị na-aza onwe ha.
usoro ihe omume - hazie oghere oge ma mee ka ndị ahịa họrọ oge na - arụ ọrụ maka gị. Gụnyere usoro ihe omume, ịtọgharị oge, kagbuo, na ncheta ntinye akwụkwọ site na email na SMS.
Nyocha ndị ahịa - rịọ, zaghachi, ma jikwaa nzaghachi ndị ahịa gị n'otu ebe. Nke a gụnyere Google na Yelp Nyocha.
Njikwa mmekọrịta ndị ahịa - GoSite nwere ebe etiti kọntaktị gbakwunyere na Quickbooks, Outlook, na Google maka ngwọta njikwa ahịa na-enweghị ntụpọ. Kpọtụrụ Hub na-enyere gị aka izipu ozi, gbanwee oge, na izipu nkwalite site na ịpị aka na pịa 1.
Akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa - site na otu nbanye, ị nwere ike ijikọ ma jikwaa azụmahịa gị n'otu ntabi anya na ntanetịime 70 n'ịntanetị.
Mmekọrịta - GoSite nwere API ma jikọọ na Google, Facebook, Yelp, Thumbtack, Quickbooks, Google Maps, na Amazon Alexa.
Enterprise - GoSite nwekwara ọtụtụ ọnọdụ enterprise Ike.
Bido na Gosite n'efu
Tags: amazon Alexaakwụkwọ ndekọ aha azụmahịakọntaktị ehiweCRMnjikwa mmekọrịta ndị ahịaFacebookgoogle maponye asiriakwụkwọ ọnụahịaakwụkwọ ndekọ aha azụmahịa nke mpagharantinye akwụkwọ ntanetịnhazi oge n'ịntanetịugwo nhaziAkwụkwọ ngwa ngwanjikwa ahaEgwu ukwuYelp
Mediafly: Nkwado Azụmaahịa na Njikwa Ọdịnaya
Imnwetacha uru data bara uru site na iji Pepperdata's Big Data Stack Optimization na akpaghị aka Ntinye